के हो महिनावारी कप भनेको ? महिलाहरुको रोजाईमा कसरी पर्दैछ ? एक पटक किनेपछि १२ बर्षलाई ढुक्क – Esewanews
Home / Headline / के हो महिनावारी कप भनेको ? महिलाहरुको रोजाईमा कसरी पर्दैछ ? एक पटक किनेपछि १२ बर्षलाई ढुक्क
Shivaram Khadka Headline, शिक्षा/स्वास्थ्य Leaveacomment 12456 Views
काठमाडौं महानगरपालिका ३१ नयाँ बानेश्वरकी सम्झना बानियाँले महिनावारी भएको समयमा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्न छोडिसक्नुभएको छ । उहाँले दुई बर्ष यता महिनावारी कप प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । बानियाँ भन्नुहुन्छ ‘प्याड जसरी बेला बेलामा किनिरहनु नपर्ने, फेरिरहनु नपर्ने भएकाले मलाई त यही सजिलो लाग्यो । ’
महिनावारी कप नियमित प्रयोग गर्ने महिलाहरु भन्छन् ‘यो प्रयोग गर्दा अति सजिलो हुन्छ । प्याड लगाउँदा बाहिर नै आकार देखिन्छ । तर कप यो,नी भित्र राख्ने भएकाले अरु मानिसलाई थाहा नै हुँदैन र असजिलो पनि हुँदैन ।’
महिनावारी कप प्याडको तुलनामा अति स्वस्थकर भएको यसका बजार प्रबद्र्धकहरु बताउँछन् । प्याड लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा यसैका कारण विभिन्न संक्रमणहरु हुन सक्छ । कतिपय प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या स्यानिटरी प्याडकै कारण उत्पन्न हुने गरेको डाक्टहरु बताउँछन् । तर महिनावारी कप १०० प्रतिशत उच्च गुणस्तरीय मेडिकल ग्रेड सिलिकनले बन्ने भएकाले शरिरमा छुँदा एलर्जी आउने वा अरु रासयनिक कारणले समस्या आउने हुँदैन । नेपालमा मेरी स्टोप्स, पुतली नेपाल, डेज फर गर्ल्स लगायत थुप्रै संघसंस्थाले महिनावारी कपको बजारीकरण गर्दै आएको छ । वासखबर बाट
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०४:३१